Amathiphu kwabengele iBig Walk 5km
Thobile Zwane - May 17, 2016
ABAGQUGQUZELI be-Discovery East Coast Radio Big Walk bathi konke sekumi ngononina ngalomjaho waminyaka yonke ozosukela eShaka Marine uphelele ePeople’s Park eMoses Mabhida Stadium ngoMeyi 22.
Iwine indebe yemeya iGolden Arrows
Fundiswa Mzobe - November 16, 2015
Ihambe ne-Golden Arrows indebe kowe-Mayoral Cup.
Bekuhlephuka umhlathi kowesibhakela
Intatheli ye-Eyethu - November 10, 2015
Bekunesibhakela esiqhwiza umentshisi eWild Coast Sun.
Ubizelwe kuBafana Bafana owasoGwini
Thami Ka-Nkosi - January 16, 2015
Ubizelwe eqenjini lesizwe u-Ayanda Gcaba.
Ubushubile umdlalo e-Albersville
Fundiswa Mzobe - July 9, 2014
Ubushubile umdlalo phakathi kwe Wild Coast Stars ne Shopsrite.
Fundiswa Mzobe - July 2, 2014
Fundiswa Mzobe - June 12, 2014
BEKUNEMIDLALO yebhola lamaphoyisa aKwaZulu Natali eVongo ezinkundleni zase-Douglas Mitchell ngoLwesine olwedlule. Amaqembu angu-8 abedlala kwase kukhethwa iqembu lesifunda. U-Major General Thembi Ndlovu ukhomanda wesiteshi saseSayidi wamukele bonke ebebekhona wase eqalisa umdlalo ngokuthi kudlale yena wafaka negoli lokuqala.